Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » OTDYKH Expo ee Russia Guul Weyn
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Bandhigga Madadaalada ee OTDYKH ee Ruushka
Bandhiggii 27 -aad ee Carwadii Madadaalada ee OTDYKH ee Ruushka ayaa la soo gabagabeeyay, waxayna ahayd guul aad u wanaagsan. Waxay socotey 7 -dii Sebtembar ilaa 9 -dii Expocentre Fairgrounds ee Moscow. Sannadkan waxaa ka qaybgalay shirkado layaab leh 450, oo ka kala yimid 41 gobol oo Ruush ah iyo 23 dal oo kala duwan.
Bandhigga Carwadda Madadaalada ee OTDYKH waxaa ka soo muuqday 450 shirkadood oo ka kala yimid 41 gobol oo Ruush ah iyo 23 dal oo kala duwan.
In ka badan 6,000 oo soo -booqdeyaal ganacsi ah ayaa goob -joog ka ahaa goob -joogga, iyo in ka badan 3,000 oo qof ayaa ka qaybgalay onleenka.
Bandhigga waxaa lagu soo bandhigay 30 dhacdooyin ganacsi oo ka badan 160 ku hadla iyo ku dhawaad ​​1,500 oo kaqeybgale.
Wadamadii ka qeyb galay bandhigga OTDYKH ee 2021 waxay ahaayeen: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, China, Cuba, Cyprus, Masar, Germany, India, Iran, Italy, Japan, Jordan, Lithuania, Moldova, Peru, Spain, Sri Lanka, Thailand, Tunisia, iyo Venezuela.
Sannadkan Bandhig Faneedka OTDYKH u dabaaldegay dhowr qof oo ku cusub munaasabadda, oo ay ku jiraan waddanka Azerbaijan, gobolka Ceará ee Brazil, maamulka Tottori ee Japan iyo shirkadda, Sri Lankan Airlines.
Ka mid ah 41-ka gobol ee Ruushka oo si sharaf leh u matalayay bandhigga, waxaa sidoo kale jiray kuwo cusub oo si aad ah loo sugayay. Kuwani waxay ahaayeen gobollada Yugra, Territory Krasnoyarsk, Tomsk, Chelyabinsk, gobollada Rostov iyo Omsk iyo Jamhuuriyadda Udmurtia.
Ka -qaybgalka bandhigga ayaa gaadhay ku dhawaad ​​10,000 oo qof shaqsi ahaan iyo ficil ahaanba. In ka badan 6,000 oo soo -booqdeyaal ganacsi ah ayaa shaqsi ahaan u yimid bandhigga halka in ka badan 3,000 oo qof ay ku raaceen bandhigga aaladaha internetka. Isagoo fududeeyay beddelladan onlaynka ah, bandhiggu wuxuu awooday inuu bandhigga u fidiyo ka -qaybgalayaasha dalwaddii ka yimid adduunka oo dhan.
Mar labaad, Carwadii Madaddaalada ee OTDYKH waxaa ka soo muuqday la -hawlgalayaal aad u fiican, gudaha iyo dibaddaba. Bandhig -faneedku wuxuu ku faanay inuu Masar ku faano inay tahay dal ay jaal yihiin sannadkan oo leh istaag cajiib ah iyo wafdi ballaaran. Gobolka la -hawlgalayaashu wuxuu ahaa Nizhny Novgorod magaaladuna waxay ahayd St. Petersburg. Wada -hawlgalayaasha rasmiga ah ee munaasabaddu waxay ahaayeen gobolka Altai iyo Jamhuuriyadda Khakassia. Wehelka rasmiga ah ee hawl wadeenka dalxiiska wuxuu ahaa Academservice. Ugu dambayntii, shuraakada guud waxay ahayd Sberbank, bangiga ugu weyn Ruushka waana mid ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee ugu horreeya adduunka.
In kasta oo ay jiraan xayiraadaha socdaalka ee caalamiga ah ee hadda jira iyo xuduudaha la xiray, soo -bandhigayaasha caalamiga ah ayaa ka soo qaybgalay adduunka oo dhan. Ku soo noqoshada quruxda badan ee carwadda, ma ahayn oo keliya Masar inay tahay dal la wadaagay bandhigga, laakiin waxay u dirtay wafdigii ballaadhnaa, oo uu hoggaaminayay mudane, Wasiirka Dalxiiska iyo Qadiimiga Masar, Mr Khaled al-Anany. Heerka sare ee xiisaha xirfadeed ee munaasabadda sannadkan waxaa sabab u ahaa dib u bilaabashada duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhexeeyay Hurghada iyo Sharm el-Sheikh iyo 41 magaalo oo ku yaalla Ruushka.
Xus gaar ah ayaa leh Xafiiska Dhiirrigelinta Dalxiiska ee Sri Lanka oo soo bandhigay meel gaar ah oo weyn oo leh saddex iyo toban shirkadood oo wax-soo-bandhig leh. Sri Lanka waxaa ku sugnaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada, Hon. Ranatunga Prasanna. Intaas waxaa dheer, Sri Lankan Airlines ayaa ka qaybgashay markii ugu horraysay taariikhda carwadda, iyaga oo taagnaa meel u gaar ah.
faallo binary ah
Laatiin Ameerika si fiican ayaa loo matalay carwada madadaalada ee 2021 OTDYKH; Cuba waxay calaamad u noqotay dib-u-noqosho qaabkii ka horreeyay masiibada ee bandhigga iyada oo leh 100m² oo taagan. Xafladda furitaanka, Wasiir Ku-xigeenka Koowaad ee Dalxiiska, Maria del Carmen Orellana Alvarado ayaa sheegtay in Cuba ay si aad ah uga shaqeyneyso sidii ay u noqon lahayd meel COVID-ammaan u ah socdaalayaasha isla markaana ay si tartiib tartiib ah isu diyaarinayso inay dib u furto xuduudaheeda. Natiijo ahaan, laga bilaabo Noofembar 15, 2021, wixii ka dambeeya, Cuba waxay baajin doontaa tijaabooyinka khasabka ah ee COVID PCR ee dalxiisayaasha, beddelkeedna baaritaanno aan kala sooc lahayn ayaa la samayn doonaa markay yimaadaan.
In kasta oo dalal badan oo reer Yurub ah ay wali xireen xuduudaha iyo xayiraadaha safarka, haddana waxaa jiray caafimaad wanaagsan oo ka yimid Yurub. Bulgaria, Spain, iyo Qubrus dhammaantood waxay lahaayeen saldhigyo u gaar ah, halka bandhig -bixiyeyaasha kale ay ka mid ahaayeen Talyaaniga, Jarmalka, iyo Lithuania.
Dadka cusub ee aan soo sheegnay ee Azerbaijan ayaa saamayn ku yeeshay mawqifkooda cajiibka ah iyo 18 shirkadood oo ka qaybqaatay. Waxay sidoo kale qabteen dhacdooyin kala duwan waxayna ku hawlan yihiin shirar horay loo sii qorsheeyay B2b oo ay la yeesheen hawlwadeennada dalxiiska ee ruushka ah iyo xarumaha warbaahinta. Tani waxay horseeday in la sameeyo wada -hadal furan oo u dhexeeya Ruushka iyo Azerbaijan.
Waxaa jiray waxyaabo badan oo iftiimiyay Bandhigga Madaddaalada ee 2021 OTDKYH, oo ay ku jiraan heshiisyo badan oo rasmi ah oo la saxiixay. Magaalada ay jaalka yihiin ee St.
Xilliga kale ee muhiimka ah ee bandhiggu wuxuu ahaa saxeexidda heshiis goboleed si loo abuuro waddada weyn ee Ruushka ee M-12. Shan gobol oo Ruush ah oo cajiib ah ayaa saxiixay heshiiska: Moscow, Jamhuuriyadda Tatarstan, gobolka Vladimir, gobolka Nizhny Novgorod, iyo Jamhuuriyadda Chuvash.
Ugu dambayn laakiin haba yaraatee, Barnaamijka Ganacsiga ee aadka loo amaanay ayaa isna ahaa guul aad u wanaagsan, oo lagu faano 30 munaasibadood oo ay ka soo qaybgaleen 160 qof oo ku hadla iyo 1,500 ergo oo la yaab leh. Muhiimada barnaamijka ganacsigu wuxuu ahaa kulan ku saabsan istaraatiijiyad cinwaankeedu yahay, Mustaqbalka Dalxiiska, Isbeddellada Socdaalka. Dhacdadan ayaa caddeysay inay tahay dood firfircoon oo dhexmartay dhowr Wasiir oo Arrimaha Dibadda ee dalxiiska ah iyo sidoo kale wakiillo ka socda Rostourism iyo UNWTO.
Gebogebadii, mar labaad daabacaaddii ugu dambaysay ee Carwadii Madadaalada ee OTDYKH waxay ahayd guul cajiib ah oo ay ka qaybgaleen 450 shirkadood oo ka kala socday 41 gobol oo Ruush ah iyo 23 dal oo kala duwan. Carwadu waxay lahayd ku dhawaad ​​10,000 oo qof oo ka soo qaybgalay, qof ahaan iyo online ahaanba.
Guddiga Expo OTDYKH waxay mahadnaq u jeedinayaan cid kasta oo ka soo qaybgashay bandhigga, waxayna rajaynayaan munaasabadda sannadka soo socda, maadaama ay sii wadaan inay jebiyaan dhulka cusub ee warshadaha socdaalka ee caalamiga ah.